Colaada iyo Abaaraha ka Jira Dhulka Somalida Ogadeeniya Yaa Masuul ka ah? – Rasaasa News
Feb 5, 2010 dhulka, Ogadeeniya, somalida
Colaada iyo gaajada ka jirta dhulka Somalida Ogadeeniya yaa caynaanka u haya?, yaase caran ah oo isha uun ka dhawra caymad la,aanta caruurta? malaha waa caalayaal shilin eegta iyo caynka K…….
Dhulka Somalida Ogadeeniya waa dhul hodan ah, gaajada iyo dib u dhac ka jirana waxaa masuul ka ah Itobiya Tigray, colaadaha ay sheegtana waxaa huriya saraakiisha ka jooga dhulka Somalida Ogadeeniya. Waloow ay jiraan dhibaatooyin ka soo faafa dhulka dawlada la,aanta ah ee dariska ah.
Xukuumada Itoobiya Tigray, ayaa sanad walba waxaa uu aduunweynuhu ku siiyaa millaayiin Dollar oo Marykan ah, marka ay dirsato qayla dhaan ku saabsan macaluul ka jirta Itobiya, gaar ahaan dhulka Somalida Ogadeeniya.
Waxaana uu aduun weynuhu isaga oo ka jawaabaya dalabka Itobiya u soo diraa raashin badan oo isugu jira cuntooyinka caadiga ah sida bariis, baasto, iyo sareen, cuntooyinka nafaqada ah sida buskudyada kala nooca ah, miishaalida nafaqaysan iyo daawooyin kala nooc ah.
Raashinkaas uu aduunweynuhu bixiyo sanad walba, wax ka gaadha dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waa wax aad u yar oo dhamaantiis ka yimaada raashinka kaydka ah ee u yaala Itobiya Tigray sida Galay iyo Sareen gaboobay.
Ciidama Itobiya umma ogola dadweynaha Somalida Ogadeeniya in ay beertaan beeraha, waxayna badanaaba ku eedeeyaan in ay raashin siiyaan ururada ka dagaalama dhulka Somalida Ogadeeniya.
Dhanka kale taliyeyaasha ciidamada Itobiya ayaan ogolayn in ay Jabhaduhu meesha ka baxaan, si dadbana uga iibiiya rasaasta ay ku dagaalamaan. Sababta ugu weyn ee ayna taliyeyaasha Itobiya Tigray u ogolayn in ay meesha ka baxaan Jabhaduhu, ayaa ah arimo dhaqaale, dawlada ayaa ku bixisa kharj colaadaha ka jirta dhulka Somalida Ogadeeniya iyada oo ugu danaynaysa saraakiisha Tigray ee jooga dhulka Somalida Ogadeeniya.
Waxaa kale oo ay saraakiishu gabaanadaan masuuliyiinta maamulka Kaalinka 5aad oo kii aan siinin kharaj [laaluush] lagu eedeeyo in uu yahay taageere ururada dagaalama, sidaasna uu ku waayo shaqadiisa ka dibna xadhig lagu dambaysiiyo.
Xukuumada Tigray oo qabiil wax ku qaybsata, ayaan qabiilna lagu fara galinin jagada uu haysto masuuliyiinta uu qabiil leeyahayna aan laga badali karin jagooyinka ay haystaan wax kasta oo ay biyiyaan.
Daacad la,aanta saraakiisha ciidamada Itobiya ee dhulka Somalida Ogadeeniya, waxaa ka mid ah in Xukuumada Itobiya ay leedahay ciidamo tiro badan, waxaa kale oo jira ciidamo laga qoray Kaalinka 5aad oo mushaar qaata xiligan, in kasta oo sida la sheego la kala diri doono. Hadaba iyada oo ay ka jiraan dhulka Somalida Ogadeeniya labadaas ciidan ayey hadana saraakiisha Itobiya ku khasbaan masuuliyiinta maamulka degmooyinka in ay la dagaalamaan ururada ay rasaasta ka iibiyaan saraakiisha Itobiya.
Arimahan iyaga ah ee ay masuulka ka yihiin saraakiisha Tigray, ayaa diidan in dhulka Somalida Ogadeeniya ay nolol wanaagsani ka hirgasho. Dhulka Canfarta oo marka la barbar dhigo dhulka Somalida Ogadeeniya aad uga liita xaga wax soo saarka, waxaa in uu dhabaatada gaajo ka baxo ka shaqeeyey masuuliyiinta Kaalinkooda oo khasbay in ayna soo fara gashanin saraakiisha Tigray loona maamulka Kaalinkooda.
Masuuliyiinta Kaalinka 5aad, waa in ay ogaadaan in ay masuuliyadi ka saaran tahay dadka ay masuulka ka yihiin, inta yar ee ay joogaan masuuliyadana waa in ay cidii ay u arkaan in ayna wadin danta guud ee dadweynaha xitaa Tigray in ay yac iska dhahaan, waa hadii mukhlis u yihiin masuuliyada.
Saaraakiisha Tigray hadaan lala xisaabtamin xisaab ma ogolaanayaan, xabada iyo afkana afka ayaa xoog badan, Itobiya inteeda kale waxa ay helaan Kilalka 5aad waa in uu helaa, xaalada ay dadweynuhu Somalida Ogadeeniya ku jiraan ay wax ka badalaan.